Chelsea oo la kulantay guuldaradii lixaad ee horyaalka iyo 9 dhacdo oo laga bartay kulanka+Sawirro
Thursday, January 24th, 2019 - 09:34:20
Tuesday February 06, 2018 - 10:48:34 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxda Cheslea ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda Watford oo ay xalay u martisay waxaana looga adkaaday 4-1, xilli ay 10 laacib ku ciyaareeysay kadib roose uu ka qaatay Bakayoko oo qadk dhexe uga dheela.
Watford ayaa goolka ku hormartay waxaana daqiiqadi 42 u saxiixay Troy Deeney kadib markii ay Cheslea bakayoko weysay daqiiqadi 30 ee ciyaarta, waxaana qeybta hore lagu kla nastay 1-0.
Marki laysku soo laabtay Hazard ayaa daqiiqadi 82 rajo geliyey Chelsea oo 10 laacib ku dheeleysa markii uuu u dhaliyay goolka barbaraha, waxaase sadddex gool lix daqiiqo uaga kala dhaliyey Janmaat, Gerard Deulofeu, iyo Pereyra .
Halkan ka aqriso dhacdooyinka kulanka laga bartay
Cheslea ayaa lumisay 6 kulan oo horyaalka ka tirsan taasoo ka badan guuldarooyinki ay la kulantay 2016-17 oo ahaa 5 guuldaro .
Blues-ka ayaa la kulantay guuldarooyin xiriir ah waliba ugu yaraan 3 gool laga dhaliyey gtan iyo October 1995 , Man City oo 4-1 uga adkaatay iyo Bluckburn oo 3-0 ku lagaday.
Watford ayaa Cheslea ka gaartay guushii u horeysay dhamman tartamada kadib 14 isku day 3 barbaro iyo 10 guuldaro ayeey horey ugala kulantay tan 1999 oo ay 1-0 uga addkaatay bishii September ciyaar dhacday.
Macallin Gracia ayaa noqday tababaarihi u horeeyay ee kulankiisa koowaad garoonkiisa ku badiya isagoo hogaaminaaya Watford.
Hazarad ayaa Watford ka dhaliyey goolkiisi u horeeyay , Huddsfield aya ah kooxda kaliya ee horyalak wajahan misane uusan gool ka dhalin.
Saddexda gool uu d xilli ciyaaredkan dhaliyey ciyaaryahan Deeney ayaa ahaa kuwa ku yimid rigooro, isgaoo ka hdlaiyay kooxdaaha waa weyn sida (Arsenal, Manchester United iyo Chelsea.
Saddex ciyaaryahan ayaa roose ku qaatay ciyaaryahan Richarlison xilli ciyaareedkan waxayna kala yihiin - Davinson Sanchez, Jonathan Hogg iyo Bakayoko taasoo ka dhigan inuu yhaay ciyaaryahanka roosaha ugu badan lagu qaatay.
Cheslea ayaa xilli ciyaareedkan lagu abaalmariyey 7 roose, waxayna 2 roose dheeer yihiin dhamaan kooxaha kale.
Pereyra ayaa noqday ciyaaryahanki afaraad ee horyaalka xilli ciyaaredekan gool dhaliya goolna caawiya isagoo badal kusoo galay kadib Morata vs Burnley, Anthony Martial , Manchester United vs West Ham iyo Andre Ayew oo Swansea vs Huddersfield.
Chelsea ayaa iminka kaalinta afaraad fahdida waxyana leedahay 50 dhibcood, waxana hal dhibic u jira Tottenham oo booska shanaad joogta.
Blues-ka ayaa kulankooda xiga waxay la dheeli doontaa kooxda Wesbrom isniinta soo aadan, halka Watford ay sabtida booqan doonto kooxda Westham.